Headache - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီနသေ့ဉ်ဇာတဈယောကျ ရုံးရောကျလာကတညျးက ဘယျသူ့ကိုမှ ပွုံးမပွနိုငျပါဘူး။တဈနကေုနျ ဘယျသူနဲ့မှစကားမပွောဘဲတဈယောကျထဲ ရုံးကအလုပျတှလေုပျ၊ အစညျးအဝေးတှတေကျ၊ မကျြနှာထားခပျတငျးတငျးဖွဈနသေညျ။
ရုံးကသူငယျခငျြး လုလုက သဉ်ဇာကို မကျြနှာငယျလေးနဲ့လာမေးသညျ။ ” ဟဲ့ နငျငါ့ကို စိတျဆိုးနတောလား? ငါမနကေ့ နငျနဲ့ အတူပွနျမယျပွောပွီးမပွနျလို့လေ? ဒါမှမဟုတျ ဂြာကွီးနငျ့ကို ဆူလိုကျလို့လား? ငါ နငျ့မကျြနှာကွညျ့ပွီးကွောကျတောငျလာပွီ။တဈရုံးလုံးကလညျး နငျ့မမေးရဲလို့သာ ။ ဘယျသူ့ကို စိတျဆိုးနတောလဲခညျြးမေးနကွေတယျ”
ဟငျ ဗုဒ်ဓေါ ” ကိုယျ့ဝမျးနာကိုယျသာသိ ” ကိစ်စကွီးက မနကျမိုးလငျးထဲက အရိပျလို ကပျလြှကျလိုကျနတော သူတို့မှ မသိဘဲ။ ဒီကိစ်စက ဟနျဆောငျပွုံးဖို့မဆိုနဲ့မဖွဈမနမေို့သာရုံးလာနရေတာ။ အိမျမှာ လှဲပွီးပဲ အိပျခငျြနတော။ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ ခဈြသူငယျခငျြးလေးကို ရှငျးတော့ပွရမညျ။
” လုလုရယျ ငါ မနကျမိုးလငျးလာထဲက ခေါငျးကိုကျလိုကျတာဆိုတာလေ ။ နားထငျ နှဈဖကျကို တဒိနျးဒိနျးနဲ့ အဆကျမပွတျဖွဈနတော ခေါငျးတဈခုလုံးလဲ တငျးကပျြနတောပဲ။ ခုတငျစဉျးစားနတော ကိုရီးယားကားထဲကလို ခေါငျးပတျလညျစညျးထားရကောငျးမလားလို့လေ။ ဒီနလေ့ညျး အရေးကွီးအစညျးအဝေးတှနေဲ့မဖွဈမနမေို့သာ လာရတာ တဈနကေုနျ ဘာကိုမှအာရုံစိုကျလို့မရ ။ ရုံးဆငျးခြိနျရောကျပါစပေဲ ဆုတောငျးနရေတယျဟယျ။”
လုလုလညျး… ” ဖွဈရလေ ။ သဉ်ဇာရယျ ငါထငျတော့ထငျပါတယျ။ နငျ့ပုံစံကမခြိုမခဉျြနဲ့။ ကဲ… ပွော … ငါ ဘာလုပျပေးရမလဲ? ဘာဆေးဝယျပေးရမလဲ?
သဉ်ဇာလညျး ..” ပွောသာပွောရတယျ ။ ငါက ခေါငျးကိုကျလသေိ့ပျမရှိဘူး။ ကိုကျလညျးဖြားတုနျးနာတုနျးခဏဆိုတော့ မသိဘူး။ စိတျညဈတယျ ရုံးဆငျးဖို့လညျး အဝေးကွီးလိုသေးတယျ။ ငါတော့ မွနျမွနျပြောကျခွငျတာပဲ သိတော့တယျဟယျ”လုလုက ပွုံးပွုံးနဲ့ … ” ဒီတဈခါတော့ ငါဆရာကသြှားပွီ။ ငါကြ ခေါငျးခဏခဏကိုကျတတျတော့ ငါ့အမ ဆရာဝနျကိုမေးထားတယျ ဘာဆေးသောကျရမလဲဆိုတာကို ။ ငါ့အမကတော့ အကိုကျအခဲလညျးပြောကျရမယျ၊ ခေါငျးကိုကျလညျးပြောကျရမယျ၊အရအေသှေးလညျး ပွညျ့မှီရမယျ၊ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျး နညျးတဲ့ BIOGESIC 500 mg ကို ခေါငျးစကိုကျတာနဲ့အစားစားပွီး သောကျဖို့မှာထားတယျ။သူပွောတာတော့ ငါတို့တှကေ အလုပျလုပျတော့ အာရုံစိုကျမြားတယျ။ အိပျရေးတဈခါတဈလပေကျြတယျ။ စိတျပူတာတှမြေားလို့ဖွဈတာတဲ့။ခေါငျးကိုကျတာကို ဆေးသောကျထားလိုကျတော့ ဒီခေါငျးကိုကျတာအတှကျ တဈနလေုံ့း စိတျမညဈရတော့ဘူးပေါ့။
အမလေး… ငါ့သူငယျခငျြးလေးရယျ ငါ့မှာဆေးအဆငျသငျ့ပါတယျ။နငျ..အခုသောကျလိုကျ ..ခဏနေ အရငျလို ပွုံးပွုံးရှငျရှငျပွနျဖွဈသှားလမျ့မယျ”ကဲ ဒီသူငယျခငျြးနှဈယောကျကတော့ သူတို့ကို ဒုက်ခပေးနတေဲ့ခေါငျးကိုကျခွငျးအတှကျ အဖွရှေိသှားပါပွီ။ ” သငျရော ခေါငျးကိုကျခွငျးအတှကျ အဖွရှေိပွီလား”
ဒီနေ့သဉ္ဇာတစ်ယောက် ရုံးရောက်လာကတည်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြုံးမပြနိုင်ပါဘူး။တစ်နေကုန် ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘဲတစ်ယောက်ထဲ ရုံးကအလုပ်တွေလုပ်၊ အစည်းအဝေးတွေတက်၊ မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်းဖြစ်နေသည်။
ရုံးကသူငယ်ချင်း လုလုက သဉ္ဇာကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လာမေးသည်။ ” ဟဲ့ နင်ငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား? ငါမနေ့က နင်နဲ့ အတူပြန်မယ်ပြောပြီးမပြန်လို့လေ? ဒါမှမဟုတ် ဂျာကြီးနင့်ကို ဆူလိုက်လို့လား? ငါ နင့်မျက်နှာကြည့်ပြီးကြောက်တောင်လာပြီ။တစ်ရုံးလုံးကလည်း နင့်မမေးရဲလို့သာ ။ ဘယ်သူ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလဲချည်းမေးနေကြတယ်”
ဟင် ဗုဒ္ဓေါ ” ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိ ” ကိစ္စကြီးက မနက်မိုးလင်းထဲက အရိပ်လို ကပ်လျှက်လိုက်နေတာ သူတို့မှ မသိဘဲ။ ဒီကိစ္စက ဟန်ဆောင်ပြုံးဖို့မဆိုနဲ့မဖြစ်မနေမို့သာရုံးလာနေရတာ။ အိမ်မှာ လှဲပြီးပဲ အိပ်ချင်နေတာ။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူငယ်ချင်းလေးကို ရှင်းတော့ပြရမည်။
” လုလုရယ် ငါ မနက်မိုးလင်းလာထဲက ခေါင်းကိုက်လိုက်တာဆိုတာလေ ။ နားထင် နှစ်ဖက်ကို တဒိန်းဒိန်းနဲ့ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာ ခေါင်းတစ်ခုလုံးလဲ တင်းကျပ်နေတာပဲ။ ခုတင်စဉ်းစားနေတာ ကိုရီးယားကားထဲကလို ခေါင်းပတ်လည်စည်းထားရကောင်းမလားလို့လေ။ ဒီနေ့လည်း အရေးကြီးအစည်းအဝေးတွေနဲ့မဖြစ်မနေမို့သာ လာရတာ တစ်နေကုန် ဘာကိုမှအာရုံစိုက်လို့မရ ။ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်ပါစေပဲ ဆုတောင်းနေရတယ်ဟယ်။”
လုလုလည်း… ” ဖြစ်ရလေ ။ သဉ္ဇာရယ် ငါထင်တော့ထင်ပါတယ်။ နင့်ပုံစံကမချိုမချဉ်နဲ့။ ကဲ… ပြော … ငါ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ? ဘာဆေးဝယ်ပေးရမလဲ?
သဉ္ဇာလည်း ..” ပြောသာပြောရတယ် ။ ငါက ခေါင်းကိုက်လေ့သိပ်မရှိဘူး။ ကိုက်လည်းဖျားတုန်းနာတုန်းခဏဆိုတော့ မသိဘူး။ စိတ်ညစ်တယ် ရုံးဆင်းဖို့လည်း အဝေးကြီးလိုသေးတယ်။ ငါတော့ မြန်မြန်ပျောက်ခြင်တာပဲ သိတော့တယ်ဟယ်”လုလုက ပြုံးပြုံးနဲ့ … ” ဒီတစ်ခါတော့ ငါဆရာကျသွားပြီ။ ငါကျ ခေါင်းခဏခဏကိုက်တတ်တော့ ငါ့အမ ဆရာဝန်ကိုမေးထားတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲဆိုတာကို ။ ငါ့အမကတော့ အကိုက်အခဲလည်းပျောက်ရမယ်၊ ခေါင်းကိုက်လည်းပျောက်ရမယ်၊အရေအသွေးလည်း ပြည့်မှီရမယ်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း နည်းတဲ့ BIOGESIC 500 mg ကို ခေါင်းစကိုက်တာနဲ့အစားစားပြီး သောက်ဖို့မှာထားတယ်။သူပြောတာတော့ ငါတို့တွေက အလုပ်လုပ်တော့ အာရုံစိုက်များတယ်။ အိပ်ရေးတစ်ခါတစ်လေပျက်တယ်။ စိတ်ပူတာတွေများလို့ဖြစ်တာတဲ့။ခေါင်းကိုက်တာကို ဆေးသောက်ထားလိုက်တော့ ဒီခေါင်းကိုက်တာအတွက် တစ်နေ့လုံး စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့။
အမလေး… ငါ့သူငယ်ချင်းလေးရယ် ငါ့မှာဆေးအဆင်သင့်ပါတယ်။နင်..အခုသောက်လိုက် ..ခဏနေ အရင်လို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြန်ဖြစ်သွားလမ့်မယ်”ကဲ ဒီသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် အဖြေရှိသွားပါပြီ။ ” သင်ရော ခေါင်းကိုက်ခြင်းအတွက် အဖြေရှိပြီလား”
Dangers of starting sex in young age
What if lactating mother is sick?